बिराटनगरमा पत्रकार यसरी थुनिए प्रहरीको भ्यानमा यस्तो छ बास्तबिक कारण !!-Nepali online news portal
बिराटनगरमा पत्रकार यसरी थुनिए प्रहरीको भ्यानमा यस्तो छ बास्तबिक कारण !!
विराटनगरः प्रहरीले पटाका बरामद गरेको फोटो र भिडियो खिच्दा विराटनगरका पत्रकार सोनुकुमार दासलाई प्रहरी भ्यानमै दुई घण्टा बन्धक बनाएर दुव्र्यवहार गरिएको छ ।
विराटनगरको व्यस्त गुद्री बजारमा बिक्री गर्न राखिएका पटाका जफत गरेको दृश्य र फोटो खिच्ने क्रममा प्रहरीले न्युज ट्वान्टी फोरका पत्रकार दासलाई ‘किन खिच्छस् ? तँ को होस् ?’ भन्दै मोबाइल र पत्रकार परिचयपत्र खोसेर जबर्जस्ती भ्यानमा कोच्दै २ घण्टा विराटनगर बजार घुमाएको दासले बताए ।
‘पत्रकार हुँ’ भनेर परिचय दिँदासमेत ‘तँ जस्ता पत्रकारले नै हो बिगारेको’ भन्दै परिचयपत्र र मोबाइल खोसेर लगेको दासले बताए । उनी नेपाल पत्रकार महासङ्घका सदस्य पनि हुन् । सादा पोशाकमा रहेका घुमुवाजस्ता देखिने प्रहरीले सर्वसाधारणकै बीचमा गालीगलौज र अपशब्द प्रयोग गर्दै भ्यानमा लगेर कोचेको उनले बताए ।
पत्रकारलाई बन्धक बनाई वडा प्रहरी कार्यालयको टोलीले २ घण्टा घुमाई भट्टीमोडबाट छाडिएको विषयमा आफूलाई जानकारी प्राप्त नभएको मोरङ प्रहरीका एसपी मनोज केसीले बताए । उनले भने, ‘के भएको रहेछ म बुझ्छु ।’ तर, केसीले घटनाबारे खासै चासो दिएनन् ।
पत्रकार दासले पत्रकार भएको परिचय खुल्ने प्रमाण दिँदादिँदै ‘जङ्गबहादुर शैलीमा’ प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेको गुनासो गरे । घटनाको निन्दा गर्दै नेपाल प्रेस युनियन मोरङले विज्ञप्ति जारी गरी घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कार्वाही गर्न र पत्रकारले स्वतन्त्रतापूर्वक रिपोर्टिङ गर्ने अवस्थालाई कुण्ठित नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।pradeshportal.com
विप्लव नेकपामाथिको प्रतिवन्धको विरोध गर्दै लेखक-साहित्यकारले सडक आन्दोलन गर्ने(भिडियोसहित)
लोकतन्त्र दिवस, जनताले के पाए ?
वाइडबडी भ्रष्टचार, निर्मला पन्तको हत्या र नागरिकता विधेयक प्रकरणका विरुद्ध विप्लवसहित पाँच पार्टीले संयक्त आन्दोलन गर्ने
किम र पुटिनबीच पहिलोपटक रुसमा भेटवार्ता हुँदै
विप्लव नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सुदर्शनसहित ६ जनालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि पठायो थुनामा